राष्ट्रिय एकता र सहकार्य आवश्यक : RajdhaniDaily.com
Home बिचार राष्ट्रिय एकता र सहकार्य आवश्यक
राष्ट्रिय एकता र सहकार्य आवश्यक
मुलुकको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि वर्षांैदेखि भारतीय पक्षले धावा बोल्दै आइरहेको छ । अहिले फेरि नेपाली भूभागलाई मिचेर लिपुलेक क्षेत्रमा जसरी सडक खनिएको छ, त्यसले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको पुनारावृत्ति भएको छ । मातृभूमिमाथिको आक्रमण कसैका लागि पनि सह्य हुन सक्दैन । चीन, पाकिस्तानलगायतका मुलुकसँग सीमा विवादका कारण पटकपटक लडाइँ गर्दै आइरहेको भारतीय पक्षलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो, आफ्नो मातृभूमि र माटो कति प्यारो हुन्छ भनेर । तर, विडम्बना यी सबै तथ्यलाई बिर्सिएर भारतीय संस्थापन पक्षले पटकपटक नेपाली भूमिमाथि आँखा लगाउनु घोर अनैतिक कार्य हो । नेपालले भारतलाई सधंै असल छिमेकीका रूपमा लिदै आएको छ । तर, भारतीय पक्ष भने नेपालको सोझोपनको फाइदा उठाउन उद्धत भइरहेको देखिन्छ । भारतले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने वीर गोर्खालीको गाथा बोकेका नेपाली कमजोर छैनन् । पटकपटक अन्याय र अत्याचार हुन्छ भने सारा नेपाली प्रतिरोध गर्न मोर्चामा आउन पनि पछि पर्नेछैनन् ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेकै राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकताका लागि पनि हाम्रा राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुन सक्दैनन् । राष्ट्रियता तथा नेपाली भूमिमाथि बलात् आक्रमण हुँदा पनि हामी एक दलले अर्को दललाई हिलो छ्याप्ने काम गर्छौं भने आमनागरिक पनि एकमत हुँदै भारतीय पक्षको विरोध गर्न चुकिरहेका छौं । सम्भवतः हामीमा रहेको एकता र सहकार्यको अभावका कारण पनि भारतले हामीमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेको हो । विगतदेखि नै हामी राष्ट्रिय मुद्दामा कहिल्यै पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकेनांै । त्यसैले पनि हामी छिमेकी राष्ट्रको दृष्टिमा कमजोर साबित हँुदै आइरहेका छांै । त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर भारतले हजारांै वर्ग मिटर नेपाली जग्गा वर्षांैदेखि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको हो । त्यसलाई फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि संवेदनशीलता देखाएन । यसअघि पनि भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नक्सा जारी गर्दासमेत सरकारले सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेन । एकदुईवटा पत्र लेखेर ध्यानाकृष्ट त गरायो तर त्यसपछि निरन्तर वार्ता र संवाद गर्न सकेन । सोही समयदेखि नै नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ताका लागि निरन्तर सशक्त दबाब दिँदै आएको भए अहिले भारतले फेरि नेपाली भूमि खनेर मानसरोवरसम्म बाटो बनाउने हिम्मत नै गर्न सक्दैनथ्यो ।
त्यसैगरी, सत्तामा रहँदै आएका शासक प्रशासकहरूले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग खुलेर डाइलग गर्न सक्ने हिम्मत पनि कहिल्यै देखाएनन् । कहिलेकाहीँ हुने द्विपक्षीय वार्तामा पनि सधैंजसो नेपाली पक्षमाथि भारतीयपक्ष नै हाबी हुँदै आए । भारतीय पक्षसँग संवाद गर्न नसकेर हो या म्याच फिक्सिङ शैलीमा हाम्रा शासकले राष्ट्रघात त गरेका होइनन ? भन्ने आशंका पनि जर्बजस्त रूपमा उठिरहेको छ । नेपाली भूमि र राष्ट्रिय अस्मिता लुटिएको अवस्थामा त्यसको सामूहिक प्रतिरोध गर्नका लागि राष्ट्रिय एकता र सहकार्य अहिलेको अहं आवश्यकता हो । यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ र सबैको सहयोग जुटाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्यथा, आगामी दिनमा फेरि पनि नेपाली भूमि यसरी नै लुटिइरहने छ र हामी झन्पछि झन् निरीह हँुदै जानेछांै ।
किसानलाई क्रेडिट कार्ड, २ सय शीतभण्डार निर्माण गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै...
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धमा सर्वाेच्चमा २५ रिट
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - May 23, 2021 0
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार...
Breaking News Kumar Raut - June 13, 2020 0
काठमाडौं । साझा पार्टीले सरकारबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा राज्यको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक र महामारीविरुद्धका योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रदर्शन स्थगन...
राजनीति Kumar Raut - October 12, 2020 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक कात्तिक पहिलो हप्ता बस्ने भएको छ । विवादबीच बस्न लागेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महŒवपूर्ण...
पहिले र अहिले, कुन हो अयोध्या ?
बिचार Kumar Raut - July 29, 2020 0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्याबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति अहिले बहस र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । सोबारे उत्पन्न मत भिन्नता तथ्ययुक्त हो-होइन ? भनी...
Editor-Picks विवेक विवश रेग्मी - March 31, 2021 0